Barcelona Oo U Muuqata Mid Luminaysa Saxeexa Da'yarkii Ku Guuleystay Golden Boy 2018 Ee Matthijs de Ligt & Kooxda Kaga Horreysa Tartankiisa - Gool24.Net
Barcelona Oo U Muuqata Mid Luminaysa Saxeexa Da’yarkii Ku Guuleystay Golden Boy 2018 Ee Matthijs de Ligt & Kooxda Kaga Horreysa Tartankiisa
December 21, 2018 Apdihakem Omer Adem
Kooxda Barcelona ayaa u muuqata mid luminaysa saxeexa da’yarka aadka loo qiimeeyo ee Matthijs de Ligt oo dhawaan ku guuleystay abaalmarinta Golden Boy, Da’yarkan ayaa xilli suuqyadii ugu dambeeyay oo idil bar-tilmaameed muhiim ah u ahaa Barca.
Kooxda difaacanaysa horyaalka Talyaaniga ee Juventus ayaa ah kooxda sida xoogan u riixaysa heshiiska da’yarkan, Bianconeri ayaa doonaysa inay sida ugu dhakhsaha badan usoo af-meerto heshiiskiisa si ay meesha uga saarto xiisaha kooxaha kale.
Juventus ayaa haatan samaynaysa dhaq-dhaqaaqyo badan oo ay ku qancinayso xiddiga ree Holland isla markaana doonayso inay kaga dhaadhiciso in doorashadiisa ugu fiicani ay tahay inuu kusoo biiro kooxda Turin.
Kooxda ree Talyaani ayaa lagu soo warramayaa inay diyaar u tahay inay xataa bixiso lacagta 75-ka Milyan ah ee ay Ajax dalbanayso saxaafada dalkaas ayaana sheegaya in Juve ay hoggaanka u hayso tartanka.
Dhinaca kale, Kooxda ree Holland ayaa doonaysa in heshiiska uu 19-jirkani ku aadayo Juventus uu noqdo mid lagu daro da’yarka Moise Kean oo dhinaca kale u wareegaya haddii la isku af-garto.
Si kastaba ha ahaatee, Haddiiba ay Juventus dhammaystirto saxeexa De Ligt waxa ay dhibaato ku noqon doontaa Barcelona oo u arkaysay mid leh hab ciyaareedkeeda isla markaana bedel haboon u noqon kara Gerard Pique oo dhammaadka waayihiisa kusii siqaya.